VaMthuli Ncube Vokakavadzana neNyanzvi dzezveHupfumi paKuderedza Huremu hweDhora reNyika
Zimbabweans compare the new note with the U.S. dollar note following the introduction of new notes by the Reserve Bank of Zimbabwe in Harare, Nov, 28, 2016.
Sachigaro werimwe sangano rinomirira vemabhizimisi reAfrica CEO Round Table vaOswell Binha vanoti gurukota rinoona nezvamari Muzvinafundo Mthuli Ncube vanofanira kuderedza huremu hwedhora remunyika sezvo zviri pachena kuti mutengo waro wadonha zvakanyanya pachitariswa mutengo wepamukoto apo riri kutengwa nemari yakawandisa
Vachipindura nhengo dzedare reparamende nezvenyaya iyi, VaNcube vakati havasi kuzotevedzera zviri kuitwa pamusika wemukoto vachideredza huremu hwedhora.
Asi chimwe chipangamazano chemutungamiri wenyika VaEddie Cross vakaudzawo bepanhau reHerald kuti dhora remuZimbabwe rikaderedzwa kubva pamadhora makumi maasere nemashanu pariri kusvika pamadhora zana padhora rekuAmerica kana kuti 1:100 zviri nani.
Kunyangwe RBZ yakaparura musika wekutengeserana mari yekunze weRBZ Foreign Currency Auction, zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka pamusika uyu sezvo vanenge vabudirira kuwana mari vave kupedza mavhiki mapfumbamwe vasati vaiwana nekuti iri kushomeka.
Izvi zvinonzi zviri kupa vemabhizimisi ava kuti vagume votenga mari pamusika wemukoto payave kutengwa nemadhaora zana nemakumi mashanu padhora rekuAmerica kana kuti 1;165.
VaBinha vanoti sezvo vanhu vakawanda munyika vachizviitira mabasa emaoko nekutenga nekutengesa mari pamukoto, mari yavanotenga inowanzoratidza huremu hwedhora remunyika chaiho kwete zvekuRBZ kusina shanduko.
Hurukuro naVaOswell Binha